Dhanieri Uye Gomba Reshumba | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
Dhanieri Mugomba Reshumba
Bhabhironi rakazotongwawo nemumwe muMedhiya ainzi Dhariyasi. Dhariyasi akaona kuti maitiro aDhanieri ainge akasiyana chaizvo neevamwe. Saka akamugadza kuti atungamirire varume vaiva nezvinzvimbo zvepamusoro vemunyika yacho. Varume ava vaiitira Dhanieri godo uye vaida kuti afe. Vaiziva kuti ainyengetera kuna Jehovha katatu zuva rega rega, saka vakaudza Dhariyasi kuti: ‘Haiwa mambo, ngapaiswe mutemo wekuti munhu wese anofanira kunyengetera kwamuri chete. Chero munhu upi zvake anenge asina kuuteerera anofanira kukandwa mugomba rakazara shumba.’ Dhariyasi akafarira zvavakataura uye akabva asaina mutemo wacho.
Dhanieri paakangonzwa nezvemutemo wacho, akabva aenda kumba kwake. Akapfugama ari pakatarisana nehwindo rakavhurika uye akanyengetera kuna Jehovha. Varume vacho avo vaiva negodo vakangoerekana vapinda mumba make uye vakamuwana achinyengetera. Vakamhanya kuna Dhariyasi vachibva vamuudza kuti: ‘Dhanieri haasi kukuteererai. Anonyengetera kuna Mwari wake katatu zuva rega rega.’ Dhariyasi aifarira Dhanieri saka akanga asingadi kuti afe. Akaswera achifunga kuti oita sei kuti aponese Dhanieri. Asi kunyange mambo pachake akanga asingakwanisi kuchinja mutemo waainge asaina. Saka aitofanira kuudza vashandi vake kuti vakande Dhanieri mugomba reshumba dzairura.
Usiku ihwohwo, Dhariyasi akatadza kurara nekuti ainetseka chaizvo nezvaDhanieri. Ava mangwanani, akamhanya kugomba reshumba akashevedzera kuna Dhanieri achiti: ‘Mwari wako akununura here?’
Dhariyasi akanzwa inzwi. Rakanga riri raDhanieri! Akabva ati kuna Dhariyasi: ‘Ngirozi yaJehovha yavhara miromo yeshumba. Hadzina kana kumbondikuvadza.’ Dhariyasi akafara chaizvo! Akarayira kuti Dhanieri abudiswe mugomba racho. Dhanieri akanga asina kana kavanga zvako. Mambo akabva arayira kuti: ‘Varume vakapomera Dhanieri ngavakandwe mugomba reshumba.’ Varume ivavo pavakakandwa mugomba racho, shumba dzakavabvambura-bvambura dzikavadya vese.
Dhariyasi akanyorera vanhu vake murayiro wekuti: ‘Munhu wese anofanira kutya Mwari waDhanieri. Akanunura Dhanieri kuti asadyiwa neshumba.’
Unonyengetera kuna Jehovha mazuva ese sezvaiitwa naDhanieri here?
“Jehovha anoziva nzira yekununura nayo mumuedzo vanhu vakazvipira kwaari.”​—2 Petro 2:9
Mibvunzo: Chii chaiitwa naDhanieri katatu zuva rega rega? Jehovha akanunura sei Dhanieri?
Dhanieri akakandirwei mugomba reshumba? Prinda kadhi iri reBhaibheri uye dzidza zvakawanda nezvaDhanieri.
Tinofanira kunyengetera kungirozi kuti dzitibatsire here?